36 Kars | RayHaber | raillynews
[16 / 01 / 2020] Filoham-pirenena Erdoğan: Yer Izahay dia hanolotra ny fiara eo an-toerana hanao fanompoana ny firenentsika '	Ankara 06
[16 / 01 / 2020] Fitaterana ho an'ny Andro fanadinana OEF any Istanbul	34 Istanbul
[16 / 01 / 2020] Hisy famindrana eo amin'ireo bus ao Kocaeli!	41 Kocaeli
[16 / 01 / 2020] Fanambarana an-trano momba ny fiara an-trano Dönmez	Ankara 06
[16 / 01 / 2020] Fihenam-bidy kilasy YHT nesorina	Ankara 06
HomeTORKIAFaritra atsinanan'i Anatolia36 Kars
East Express sy ny fizahan-tany momba ny East Express Route 2020
Lalana East Express 2020: Malaza amin'ny tanora, ny East Express miala ao Ankara ary tonga ao amin'ny Kars avy amin'i Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan ary Erzurum. Ivotoerana afovoany miandry 5-10 minitra Atsinanana [More ...]
East Express Ankara Kars Route et Map
East Express Ankara Kars Lalana fiaran-dalamby sy sarintany: malaza indrindra eo amin'ny tanora, ny Eastern Express miala amin'ny Ankara ary mipaka any Kars avy amin'i Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan ary Erzurum. Ivontoerana afovoany 5- [More ...]
Ny vidin'ny tapakila East East 2020: malaza indrindra eo amin'ny tanora, ny East Express mivoaka ao Ankara ary mipaka any Kars avy amin'i Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan ary Erzurum. 5 - 10 minitra ao amin'ny foibe foibe [More ...]
Fizahantany Atsinanana sy East Express Bus amin'ny 2020
Fizahantany Atsinanana sy East Express Bus Ora 2020: Misy safidy roa ao amin'ny East Express sy ny East Express ary ny East Express Touristic. [More ...]
Fandaharam-potoana Atsinanana 2020
Ny vidin'ny tapakila Atsinanana 2020: Malaza indrindra amin'ny tanora, ny East Express miala any Ankara ary mipaka any Kars avy amin'i Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan ary Erzurum. 5 - 10 minitra miandry ao amin'ny toeram-piantsonan'ny foibe [More ...]
Sarintany Atsinanana Atsinanana 2020
Map of the East Express Route Map 2020: Ny East Express, izay tena malaza amin'ny tanora dia miala any Ankara ary mipaka any Kars avy amin'i Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan ary Erzurum. 5 - 10 minitra miandry ao amin'ny toeram-piantsonan'ny foibe [More ...]
Tsy afa-po amin'ny fitateram-bahoaka ny mponina ao Kars
570 isan-jaton'ny olona 61,4 arivo nanaovana fanadihadiana no tsy afa-po tamin'ny fitateram-bahoaka. Raha ny momba ny fitateram-bahoaka ao an-tanàna, izay no nianjaran'ny voan'ny olompirenena hatramin'ny lasa; [More ...]
Tena mahaliana ny Atsinanana Express 2020
Ny mahaliana lehibe amin'ny Eastern Express: ny Eastern Express, izay tantanan'ny TCDD Tale jeneralin'ny fitaterana amin'ny zotra Ankara-Kars, no tena tiana noho ny maha-zava-dehibe azy ireo amin'ny lamasinina tato anatin'ny taona vitsivitsy sy ny fiaraha-miasa amin'ireo mpandraharaha mpizahatany. [More ...]
Ny tokony ho fantatrao momba ny dia mankany Atsinanana Express
Raha jerena fa ny tambazotra vy no lalana fitaterana manan-danja indrindra tany am-piandohan'ny Repoblika, dia tsara ny fampandrosoana fa ny Eastern Express dia eo amin'ny fandaharam-potoana indray. Ny MacerapErest dia mahaliana indrindra amin'ny taranaka tanora kokoa sy amin'ny taranaka ambony. [More ...]
Ny Mpianatra Anjerimanontolo Iğdır nikarakara fitsangatsanganana ara-teknika ho an'ny talen'ny Kars Logistics Dirate
Iğdır University Vocational School Logistics Program an'ny mpianatra kilasy faha-2 dia nandamina fitsangantsanganana ara-teknika mankany amin'ny Kars State Railways (TCDD) - Dirte Kars Logistics sy Tale fiofanana momba ny gara. Railway, sampana manan-danja amin'ny sehatry ny lozika [More ...]
300 Sivy an'arivony no nifindra nankany Baku Tbilisi Kars Railway Line
Ny "4. Kamuran Yazıcı, Tale jeneralin'ny TCDD Taşımacılık AŞ, nanao kabary momba ny "Fitaterana sy Logistik" ao anatin'ny ambaratongan'ny Vovonana Iraisam-pirenena Silk Road. [More ...]
Governoran'i Kars ny fandraisana anjaran'ireo Tiorka Öksüz, Sarıkamış Ski Center ho an'ny rafitra vaovao sy 6 metatra isan'ora sy nipetraka amin'ny efitra mihidy ho an'ny olona arivo 6 3 in segondra, dia ny voalohany, ary afa-tsy Torkia [More ...]
Androany amin'ny tantara: 17 Janoary 1933 Ny Ministeran'ny Fiarovana
Filoham-pirenena Erdoğan: Yer Izahay dia hanolotra ny fiara eo an-toerana hanao fanompoana ny firenentsika '
Hisy famindrana eo amin'ireo bus ao Kocaeli!
Ao amin'ny Ankara Metro sy Başkentray ny horonantsary fampiroboroboana Bursa Iznik
Fihenam-bidy kilasy YHT nesorina
Tsy misy fanafody fanampiny mankany amin'ny seranam-piaramanidina Sabiha Gökçen
Fametrahana ny tetikasan'ny seranam-piaramanidina Carbonless hanoherana ny famoronana manerantany
Aliağalılar Te-hahazo tombontsoa amin'ny serivisy ESHOT
TransportationPark dia hanao sidina fanampiny ho an'ny fanadinana OEF
Mpamatsy trano trano mitady trano amin'ny raharaham-pitantanana fananana
Lalana sy vanim-potoana 510 sy 525 ireo lamina fitateram-bahoaka any Kocaeli!
Famoronana ny oram-panala amin'ny famoahana hetsika KarFest
Ho fetibe mareva-doko mandritra ity taona ity ny fetin'ny ririnina any Winter
Ny fiara mpitondra fiara tsy mataho-dranomaso any amin'ny 2030
Voalohany Commercial Fiara Hybrid novokarina tao Torkia Road Quits!